Cambodia,aCountry of Khmers | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on November 21, 2017 November 21, 2017 by Nu Myat
ကမ္ဘောဒီးယားဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးမားဆုံး ဘာသာရေးကျောင်းတော်ကြီး တည်ရှိရာနိုင်ငံ၊ အင်ပါယာကြီးထွားခဲ့တဲ့ ခမာတို့ရဲ့ အန်ကောမြို့တော်ရှိရာ နိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အကြီးဆုံးရေကန်ကြီးရှိရာ နိုင်ငံစတဲ့ အကောင်းဆုံးအချက်တွေ မြင်ယောင်မိကြသလို တစ်ဖက်မှာလည်း
ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက် မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့နိုင်ငံ၊ လေးနှစ်တာကာလအတွင်း လူပေါင်း ၂သန်းကျော် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်အတန်းတူညီအောင် ပညာတတ်လူတန်းစား၊ သူဌေးသူကြွယ်မှန်သမျှ အကုန်ရှင်းပစ်ခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံ စတဲ့ နိမ့်ကျခဲ့တဲ့ အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုလည်း မြင်ယောင်မိကြမှာပါ။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ သွားလည်တဲ့အခါ နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်ဆုံးကာလ၊ အကောင်းဆုံး၊ အမွန်အမြတ်အထားဆုံးနေရာတွေ သွားလေ့လာကြရတာများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားမှာတော့ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အနိမ့်ကျဆုံးအခြေအနေကို လေ့လာနိုင်အောင်ပြသထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် Cambodia သွားလည်တဲ့အခါမှာလည်း ဒီ အခြေအနေ၂မျိုးလုံးကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ သံဝေဂတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကာလတွေက ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ Cambodia နိုင်ငံကိုလည်း ချီးကျူးမိပါတယ်။
မြို့တော် – ဖနွမ်းပင်
အသုံးပြုငွေ- Cambodian Riel ( US$ကိုလည်း အလွယ်တကူသုံးစွဲတာကြောင့် ပိုက်ဆံမလဲဘဲ $ပဲ သုံးလည်းရပါတယ်။ ငွေလဲမယ်ဆိုရင်တော့ ၁ဒေါ်လာကို ကမ္ဘောဒီးယားပိုက်ဆံ ၄၀၀၀ကျော်ရပါမယ်)
အချိန်ကွာခြားချက်- ရန်ကုန်ထက် နာရီဝက်ပိုစောပါတယ်။ ဥပမာ- ရန်ကုန်မှာ ၁နာရီဆို အဲ့မှာ ၁နာရီခွဲ ရှိနေပါပြီ
Tourist Attractions (ဘာတွေလည်စရာရှိလဲ)
ဖနွမ်းပင် (Phanom Penh)
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရောက်ရင် သူ့ရဲ့ မြို့တော်တော့ သွားလည်သင့်ပါတယ်။ Camboidaမှာတော့ အန်ကောဝပ်ရှိတဲ့ Siem Reap ကိုပဲ သွားကြတာများပါတယ်။ နိုငံရဲ့ မြို့တော် ဖနွမ်းပင်မှာလည်း သွားလည်စရာနေရာတွေရှိပါတယ်။
Royal Palace (တော်ဝင်နန်းတော်ကြီး)
ကမ္ဘောဒီးယား နန်းတော်က ဘန်ကောက်က နန်းတော်ရယ်၊ မြဘုရားရယ်နဲ့ ဆောက်လုပ်ပုံတွေ ဗိသုကာဒီဇိုင်းတွေ တော်တော်ကိုဆင်သလိုပဲ။ နန်းတော်ကြီးကို ၁၈၆၀ခုနှစ်ကတည်းက တည်ထားခဲ့တာပါ။ နန်းတော်ကြီးမှာ လက်ရှိဘုရင်နေနေတုန်းပဲတဲ့။ ဘုရင်ကြီးက အသက်၆၅နှစ်ရှိပေမဲ့ အိမ်ထောင်မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ နောက်တက်မယ့်ဘုရင်တွေကို တူတွေထဲက ရွေးပေးရမှာတဲ့လေ။ နန်းတော်ဝင်းထဲက ညီလာခံခန်းမတွေ၊ တခြားအဆောင်နဲ့ ခန်းမတွေ လေ့လာလို့ရပေမဲ့ လက်ရှိဘုရင်နေနေတဲ့ ဝင်းထဲတော့ ဝင်ခွင့်မပေးထားပါဘူး။
နန်းတော်ဝင်းနဲ့ ကပ်ရပ်မှာ ငွေဘုရား (Silver Pagoda) ဆိုတာလည်းရှိတယ်။ ဘုရားဆောင်ကြမ်းပြင်ကို ငွေထည်တွေအပြည့်ခင်းထားလို့ Silver pagoda လို့ခေါ်တာတဲ့။ ဘုရားဆောင်ထဲမှာ မြဘုရားဆင်းတုနဲ့ တခြားရှေးဟောင်းဆင်းတုတွေလည်း ဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။ စိန်အလုံးပေါင်း ၉၀၀၀ ကျော်တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ ရွှေအစစ်နဲ့ သွန်းလုပ်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်လည်း ထင်ရှားတယ်။ စိန်အကြီးဆုံးက ၂၅ကာရတ်တောင်ရှိတာပါတဲ့။
National Museum (အမျိုးသားပြတိုက်)
ခမာတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ အနုပညာလက်ရာတွေကို တစ်နေရာထဲမှာ ကြည့်နိုင်မယ့် ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ အကြီးဆုံးပြတိုက်တဲ့။ ရှေးဟောင်းရုပ်တုကြီးတွေအများကြီးပဲ ပြထားတာ။ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းပေါင်း ၁၄၀၀၀ကျော်တောင်ရှိတာတဲ့။ ဒါပေမဲ့သမိုင်းနဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း စိတ်ဝင်စားမှ သွားပါရှင်။ စိတ်မ၀င်စားရင်တော့ ဒီနေရာကိုကျော်လိုက်လို့ရတယ်။
၁၉၇၅ကနေ ၁၉၇၉ခုနှစ်အထိ ၄နှစ်တာကာလဟာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက် တကယ့်ငရဲလိုပါပဲ။ အာဏာရှင်ပိုပေါ့ ခေါင်းဆောင်တဲ့ ခမာနီတွေ အုပ်စိုးတဲ့ကာလမှာ လူတန်းစားအားလုံး တပြေးညီဖြစ်အောင်ဆိုပြီး ချမ်းသာသူတွေ၊ ပညာတတ်တွေ၊ ရာထူးကြီးသူတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ သူတို့စကားနားမထောင်သူတွေ အကုန်လုံးကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ လူတွေအကုန် အိုးအိမ်တွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး သူတို့ သွားခိုင်းရာ အရပ်လေးမျက်နှာကို ကိုယ်စီ အ၀တ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ နေ့ရက်ပေါင်းများစွာ ခရီးနှင်ခဲ့ရတယ်။ သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စခန်းတွေမှာ သူတို့ပြောစကားနားထောင်၊ သူတို့ ခိုင်းတာလုပ်၊ ကျွေးတာစား အဲ့လိုပဲ အလိုက်သင့်နေခဲ့ကြရတာတဲ့လေ။
ဒီ Killing Field ဆိုတာကတော့ လူသတ်ကွင်းပေါ့။ ခမာနီလက်ထက်မှာ လူဦးရေ ၂သန်းကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ Cambodia မှာ လူသတ်ကွင်းတွေ အများကြီးပေါ့။ နုမြတ်တို့သွားလေ့လာခဲ့ရတဲ့ လူသတ်ကွင်းကတော့ ဖနွမ်းပင်မြို့ကနေ ၁ နာရီလောက်မောင်းရတဲ့ Choueng Ek နေရာက Killing Field ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ပင်တွေ နွယ်ပင်တွေ အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ သာယာတဲ့နေရာလေးက တစ်ချိန်တုန်းက လူ့အသက်ဝိဥာဉ်ပေါင်းကို ခြွေရာ လူသတ်ကွင်းဖြစ်ခဲ့တာ ၀မ်းနည်းစရာပါ။ အဲဒီဝင်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲ။ ၀မ်းနည်းသလိုလို။ ငိုချင်သလိုလို။ ၀င်းကြီးအလည်မှာ ခန့်ထည်တဲ့ အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုရှိနေတယ်။ အဲ့အဆောက်အအုံကြီးနားလည်းရောက်ရော စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ အလည်က မှန်ဗီရိုကြီးထဲမှာ အရိုးခေါင်းတွေ အရိုးခေါင်းတွေ မျက်စိတစ်ဆုံးပဲ။ ဒီလူသတ်ကွင်းထဲမှာ သတ်ဖြတ်မြှုပ်နှံထားတဲ့ အရိုးခေါင်းတွေတဲ့။ အရိုးခေါင်းပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်တောင် ပြသထားတာ။
ခမာနီတွေကျဆုံးတုန်းက ဒီိလူသတ်ကွင်းထဲ ၀င်ရှာတာ အလောင်းပေါင်း ၉၀၀၀ နီးပါးတွေ့ခဲ့ရတယ်တဲ့လေ။ အဲ့မှာ သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ အ၀တ်အစားအပိုင်းအစတွေ၊ သတ်ရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဓာတုဆေးမှုန့်တွေထားရှိရာနေရာတွေ၊ သတ်တဲ့အခါ အော်သံမကြားရအောင် ဖွင့်ထားတဲ့ လော်စပီကာကြီးချိတ်ဆွဲရာ သစ်ပင်ကြီးတွေ၊ လူသေအလောင်းတွေ စုပုံထားတဲ့နေရာတွေ စသဖြင့် အရာရာတိုင်းက ခြောက်ခြားဖို့ကောင်းလှပါတယ်။
ခမာနီလက်ထက်မှာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့စခန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီစာသင်ကျောင်းကို အခုအခါမှာတော့ ပြတိုက်အဖြစ်ပြသထားတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက ကလေးသူငယ်လေးတွေရဲ့ စာအံသံလေးတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ စာသင်ခန်းတွေက အဲ့ကာလမှာတော့ နာကျင်လွန်းလို့ အာခေါင်ခြစ်အော်တဲ့အသံတွေ၊ ငိုကြွေးသံတွေပြည့်ရာ အချုပ်ခန်းတွေ၊ နှိပ်စက်ခန်းတွေ အဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။
ပျော်ပျော်ပါးပါးဆော့ကစားခဲ့တဲ့ ကျောင်းကစားကွင်းဟာလည်း အခုအခါမှာတော့ အလောင်းတွေမြှုပ်နှံရာ အုတ်ဂူဖြူဖြူတွေ အစီအရီနဲ့လေ။ ကလေးတွေ နိုင်ငံတော်သီချင်းသီဆိုရာ အလံတိုင်တောင် ကြိုးဆွဲချသတ်တဲ့နေရာအဖြစ် ပြောင်းခဲ့ကြတာတဲ့..
လူပေါင်း ၁၇၀၀၀ကျော် ကိုKilling Field မှာ မသတ်ခင် ဒီကျောင်းထဲ ဖမ်းချုပ်နှိပ်စက်တာတဲ့။ တကယ့်ငရဲခန်းတွေလိူပါပဲ။ နောက်ဆုံးခမာနီတွေ လက်နက်ချလိုက်တဲ့အချိန် အဲ့ကျောင်းကို ၀င်စီးတော့ အချုပ်ခန်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်မှာ အသက်ရှင် ကျန်ခဲ့တာ ၇ယောက်ပဲ ရှိတော့တယ်တဲ့လေ။
ကျောင်းထဲက အချုပ်ခန်းတွေ၊ နှိပ်စက်ထားတဲ့ပုံတွေ၊ သေဆုံးခဲ့တဲ့သူပုံတွေ၊ နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ လက်နက်တွေ ပတ်ကြည့်ရင်း အတော်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာ။ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ ကောင်းကိုမကောင်းတာပဲ။ အဲ့ကျောင်းလို ငရဲခန်း၊ နှိပ်စက်စခန်းတွေ တခြားနေရာတွေမှာရှိသေးတယ်။ တချို့ကိုတော့ ကျောင်းအဖြစ်ပြန်ဖွင့်ထားတယ်တဲ့။ ကြက်သီးထစရာကြီးနော်။
အနိဌာရုံတွေ မမြင်ချင်ရင်တော့ ဒီနေရာတွေ မသွားပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဖနွမ်းပင်မြို့တစ်ပတ် ဆိုက်ကားနဲ့လည်လည်ထွက်လည်းရတယ်။ သူတို့ဆိုက်ကားကတော့ ဒီကဆိုက်ကားနဲ့တော့ မတူဘူးပေါ့။ အမိုးပါတယ်။ ပြီးတော့ စီးသူကရှေ့က၊ မောင်းသူက နောက်ကနေ မောင်းရတာ။ ဆိုက်ကားတစ်စီးကို ၅$နဲ့ အတူလိုက်ရှင်းပြတဲ့ Tour Guide က တစ်ဖွဲ့ကို $၅၀ ပေးရပါတယ်။
ကမ္ဘောဒီးယားက ပြင်သစ်ကိုလိုနီလက်အောက်ရောက်ခဲ့တာဆိုတော့ ပြင်သစ်အဆောက်အအုံတွေရယ်၊ တရုတ်ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတွေရယ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတွေရယ်ကို ၃နေရာခွဲပြီး တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ ဆိုက်ကားတွေနဲ့ပို့ပေးတာ။ တစ်နေရာရောက်ရင် လမ်းဆင်းလျှောက်ပြီး ဂိုက်က စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေ လိုက်ရှင်းပြတယ်။ အိမ်ကြိုအိမ်ကြား လမ်းကြို လမ်းကြားလျှောက်သွားရတော့ ဖနွမ်းပင်မြို့ရဲ့ လူနေမှုဘ၀အစစ်အမှန်တွေ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ နယ်ခံတွေနဲ့ တသားထဲကျသလိုခံစားရတဲ့ အစီအစဉ်ပေါ့။ ရန်ကုန်မှာလည်း ပန်းဆိုးတန်း၊ တရုတ်တန်းနဲ့ သိမ်ဖြူဘက်ကို အဲ့လို ဆိုက်ကားနဲ့ လိုက်ပြရင် ပိုတောင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းဦးမယ်ထင်တယ်။
ဈေးတွေကတော့ Central Marketနဲ့ Russian Market ဆိုတာရှိတယ်။ Central Market ကတော့သူတို့ရဲ့ ဗဟိုဈေးပေါ့။ တကယ့်ဈေးလိုပါပဲ။ ကုန်စိုတွေရော ကုန်ခြောက်တွေပါရောင်းနေတာ။ Russian Market မှာကြတော့ သူတို့ဆီမှာ လာချုပ်တဲ့ World wide brand တွေရဲ့ စက်ရုံကျ အထည်တွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ရနိုင်ပြီး အမှတ်တရ ပစ္စည်းတွေလည်း ရောင်းတယ်။ Shopping Center အနေနဲ့ကတော့ သူတို့ဆီမှာ အကြီးဆုံး AEON Mall ဆိုတာရှိတယ်။ အဲ့မှာဝယ်လို့ရတယ်။
သမိုင်းတွေ ရာဇဝင်တွေလေ့လာပြီးတဲ့အခါ ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ နေရာတွေဆီသွားပြီး မွန်းကျပ်နေတာတွေ ဖြေဖျောက်ရမှာပေါ့။ ဖနွမ်းပင်ရဲ့ နောက်ဆုံးညမှာ ဖနွမ်းပင်ရဲ့ အကြီးဆုံး AEON mall ရယ်၊ အသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ Night Market ဖြစ်တဲ့ Jet’s container market ရယ်ရောက်ခဲ့တယ်။ Bar တွေ၊ Club တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေများတော့ အဲ့မှာတော့လူငယ်တွေနဲ့ စည်မှစည်ရယ်။ ကမ္ဘောဒီးယားလူငယ်တွေ တွေ့ချင်အဲ့သွားလို့ ပြောရမယ်။ Street Foods တွေ မြည်းစမ်းချင်ရင်တော့ အရင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ Night Market ကိုသွားပါလို့။
ဆီယမ်ရိ(ပ်) Siem Reap
ရှေးဟောင်းဘုရားကျောင်းတွေ အများကြီးရှိလို့ ကျွန်မတို့ဆီက ပုဂံနဲ့ ညီအစ်မမြို့တော်ထားတဲ့ မြို့တော်ကြီးပါ။ အဲ့ဒီက ဘုရားကျောင်းတွေ သွားလည်ဖို့ Angkor Pass ဆိုတဲ့ လက်မှတ်ဖြတ်ရပါတယ်။ တစ်ရက်ကို ၃၇ဒေါ်လာ၊ ၃ရက်ကို ၆၂ဒေါ်လာနဲ့ ၇ရက်ကို ၇၂ဒေါ်လာ ပေးရပါတယ်။ လက်မှတ်ကို လက်မှတ်ရုံမှာ သွားထုတ်ရပြီး ကိုယ့်ဓာတ်ပုံနဲ့ တစ်ခါတည်းရိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်။ နုမြတ်တို့ကတော့ ၃ရက်လက်မှတ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အများစုကတော့ ၁ရက်လက်မှတ်ပဲ ဖြတ်ပြီး ဘုရားကျောင်းတွေကို ၁ရက်ထဲ အပြီး လည်ကြပါတယ်။ လက်မှတ်ကို ကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်ထားဖို့၊ မပျောက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းတွေ အ၀င်မှာ လက်မှတ်စစ်ဆေးလေ့ရှိလို့ပါ။
အန်ကောဝပ်ကတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သလို ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအံ့ဖွယ်ထဲကတစ်ခု (Ancient Wonder of the World) လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခမာတို့ရဲ့အကောင်းဆုံး ဗိသုကာလက်ရာ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ အထွတ်အမြတ်ထားရာဖြစ်လို့ ကမ္ဘောဒီယား အလံမှာတောင် အန်ကောဝပ်ကျောင်းတော်ကြီးပုံကို ထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်။ နိုင်ငံတော်အလံမှာ အဲ့လို Landmark ထည့်ထားတာ သူနဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်။
Angkor ဆိုတာ City တဲ့။ Wat ဆိုတာက Temple ဆိုတော့ City of Temple ဘုရားကျောင်းမြို့တော်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ မြို့တော်ဆိုတဲ့အတိုင်း ကျောင်းဝင်းကြီးကို ကျုံးတွေ၊ မြို့ရိုးတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းထားတာတွေ့ရတယ်။ စဆောက်ဆောက်ချင်းကတော့ ဗိဿနိုးနတ်မင်းကြီးကို ပူဇော်ထားတဲ့ ဟိန္ဒူကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့ အခုအခါမှာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်ကြီးပါ။
အပေါ်ဆုံးအဆင့်ကိုတက်ဖို့က လူအကန့်အသက်နဲ့တက်ရတာကြောင့် တန်းစီရပါတယ်။ မတ်လည်းမတ်လို့ လူကြီးတွေ မတက်သင့်ပါဘူး။ အပေါ်ဆုံးကနေတော့ အန်ကောဝပ်ပတ်လည်က ရှုခင်းတွေ မြင်နိုင်ပါတယ်။
အန်ကောသုမ်လို့ခေါ်တဲ့ မြို့ဟောင်းကြီးမှာ မြို့ရိုးလေးဘက်ရှိပြီး မြို့ရိုးဂိတ်ကကျတော့ အရှေ့ဘက်မှာ ဂိတ်၂ခုရှိနေလို့ စုစုပေါင်း ဂိတ်၅ခုရှိပါတယ်။ တောင်ဘက်ဂိတ်က အန်ကောဝပ်နဲ့နီးတော့ လူသွားလူလာများပြီး စည်ကားတယ်။ အရှေ့ဘက်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးရှိတယ်။ နုမြတ်တို့ကတော့ Gate of the Dead လို့ခေါ်တဲ့ အဲ့ခေတ်က လူသေအလောင်းတွေကို မြို့ပြင်ထုတ်ရာ အရှေ့ဘက်ဂိတ်ကနေ Victory Gate လို့ခေါ်တဲ့ နောက်ထပ် အရှေ့ဘက်ဂိတ်အထိ မြို့ရိုးပေါ်ကနေ လျှောက်သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။
မြို့ရိုးတစ်ဖက်ကို ၃ကီလိုမီတာ(၁.၉မိုင်) ရှိလို့ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၃.၄မိုင်ရှိတဲ့မြို့ဟောင်းကြီးထဲမှာ ဘုရားကျောင်းတွေ အများကြီးရှိတော့ ပုဂံရောက်နေသလိုတောင် ခံစားရတယ်။
အန်ကောသုမ်မြို့ဟောင်းကြီးရဲ့ အလည်တည့်တည့်မှာ ရှိနေပြီး အရပ်လေးမျက်နှာကို မျက်နှာမူနေတဲ့ ရုပ်တုကြီးတွေကြောင့် နာမည်ကျော်တဲ့ ဘုရားကျောင်းကြီးပါ။ ခမာဘုရင် ဂျာယာဗာမန်ကြီးကို ရည်စူးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဘုရားကျောင်းမို့လို့ ဒီမျက်နှာကြီးတွေက ဘုရင်ကြီးရဲ့ မျက်နှာဖြစ်မယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်။ မျက်နှာတော်က ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ မျက်လုံးမှိတ်ထားကာ အရာရာကို တတ်သိနားလည် ငြိမ်းအေးနေတဲ့သဏ္ဏာန်ဖြစ်နေပါတယ်။ အရပ်လေးမျက်နှာလှည့်နေတဲ့ မျက်နှာတော်ရုပ်တုကြီး ၅၀ခုရှိတာကြောင့် မျက်နှာတော်က ၂၀၀ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီတော့ကျောင်းဆောင်ကြီးပေါ် ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် မျက်နှာတော်တွေ မြင်ရပြီး ဆန်းကြယ်လှပါတယ်။
ကျောက်တုံးကြီးတွေ နေရာအနှံ့ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ဒီနေရာဟာလည်း ကမ္ဘောဒီးယား ရှေးဟောင်းမြို့တော်ကြီးထဲက အထင်ကရနေရာတစ်ခုပါပဲ။ ရှေးခေတ်ခမာဘုရင်ရဲ့ ပွဲကြည့်စင်ကို ဆင်ရုပ်ကြီးတွေနဲ့ တောက်လျှောက်ပုံဖော်ထားတာ။ အဲ့ဝင်းအထဲမှာ နေရာအနှံ့ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးတွေရယ်၊ ခလယ်က ကျောင်းဆောင်ကြီးဆီ တန်းတန်းကြီး ရောက်သွားတဲ့ လျှောက်လမ်းရယ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အမြင်ဆန်းကြယ်လှပါတယ်။ ဒီဝင်းထဲမှာ အရင်က ဘုရင့်နန်းတော်ရှိခဲ့ပေမဲ့ အုတ်မြစ်ရာ မတွေ့တာကြောင့် သစ်နဲ့ဆောက်ခဲ့တဲ့ နန်းတော်ဖြစ်မယ်တဲ့လေ။
Tomb Raider ဘုရားကျောင်းလို့နာမည်ကြီးတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးပါ။ Holloywood မင်းသမီး အင်ဂျလီနာ ဂျိုလီပါတဲ့ Lara Croft : Tomb Raider ဇာတ်ကားက ဒီကျောင်းမှာရိုက်ထားတာ။ အဲ့ကားလည်းထွက်ပြီးရော Cambodia ကို လူသိပိုများလာပြီး Tourisim လည်း အရမ်းတိုးတက်လာတာတဲ့။
သစ်ပင်ကြီးတွေ ဝါးမြိုနေတဲ့ Ta Prohm ဘုရားကျောင်းဝင်းက တကယ်ထူးခြားပါတယ်။ ၁၂ရာစုတုန်းကဆောက်ခဲ့တဲ့ ဒီဘုရားကျောင်းကြီးကို အဲ့ခေတ်က ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သင်ကြားပေးတဲ့ကျောင်းအဖြစ်ရော၊ တိုင်းရင်းဆေးတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာအဖြစ်ရော အသုံးပြုခဲ့ကြတာတဲ့။ အခုတော့ အပင်ကြီးတွေက ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတွေကို ဝါးမြိုနေသလိုဖြစ်နေတာက အမြင်အရမ်းဆန်းတာပဲ။ ကိုယ်တွေဆီမှာလည်း အဲ့လိုနာမည်ကြီး Hollywood ကားတစ်ကားလောက် လာရိုက်ရင်ကောင်းမယ်နော်။ ဒါမှ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလှတွေ ကမ္ဘာကပိုသိမှာ။
နေ၀င်ချိန်ကို အန်ကောသုမ်ရှေးဟောင်းမြို့တော်ကြီးရဲ့ ကျုံးကြီးမှာ လှေစီးရင်း ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ကျုံးက တချို့ဘက်အခြမ်းတွေမှာတော့ ရေခမ်းနေပါပြီ။ ရေရှိတဲ့ဘက်မှာ စီးရတာပါ။ စီးချိန်တစ်နာရီလောက်ကြာလို့ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း စကားတပြောပြော ၀ိုင်နဲ့ ဘီယာလေးသောက်ရင်း ရှုခင်းလေးကြည့်ရင်း သဘာဝအလှကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။
ညဘက်မှာ သွားကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ဆပ်ကပ်ပွဲပါ။ ရန်ကုန်မှာ ပြသွားတဲ့ ရွှေဒေါင်းဆပ်ကပ်နဲ့ ဆင်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေမှုတွေကတော့ ကွဲတာပေါ့လေ။ ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးတွေချည်း ဖျော်ဖြေကပြခဲ့တဲ့ ဆပ်ကပ်လေးက တကယ်ချစ်စရာပါ။ အံ့အားသင့်စရာလည်းကောင်းပါတယ်။ ညဘက်အားရင် သွားကြည့်သင့်ပါတယ်။ လက်မှတ်ဈေးနှုန်းက နေရာပေါ်မူတည်ပြီး 18$, 28$နဲ့ 38$ ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ညဘက်၈နာရီတိုင်း ကပြဖျော်ဖြေပါတယ်။ ဆပ်ကပ်ဝင်းထဲမှာ စားသောက်ဆိုင်ရှိပြီး ဆပ်ကပ်မကြည့်ခင် တစ်ခါတည်း ညစာ စားလို့ရပါတယ်။
နေ့လည်ဆို Old Market ညဆို Angkor Night Market နဲ့ Noon Night Market သွားပါ။ ညဘက်မှာ Pub Street ကလည်း စည်ပါတယ်။ Shopping Mall ဆိုရင်တော့ Old Market နားမှာ Angkor Trade Center ဆိုတာရယ် Lucky Mall ဆိုတာရယ် ရှိပါတယ်။
Siem Reap ကနေ ၁နာရီခွဲလောက်မောင်းရင်ရောက်တဲ့ Phnom Khlen ရေတံခွန်ကြီးက တောင်ပ်ါမှာ ရှိပြီး ကြီးမားလှပပါတယ်။
နာရီဝက်လောက်မောင်းရင်ရောက်တဲ့ Tonle Sap ရေကန်ကြီးကတော့ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အကြီးဆုံးရေကန်ကြီးပါ။ ရေကန်ကြီးက ကျယ်တော့ ရေတွေက မျက်စိတစ်ဆုံးပဲ။ ရေပေါ်ရွာလေးလည်းရှိတော့ ရေကန်ထဲ လှေစီးပြီး သွားလည်နိုင်ပါတယ်။
This entry was posted in Adventure, Asia, Heritage, Travel, Uncategorized and tagged Asia, Travel. Bookmark the permalink.
← Vienna, the City of Art
Nepal where Mt.Everest exists →